Daawo: Baydhabo iyo taariikhdii qarsooneyd – SOOMAALPEDİA
Baydhabo, waa magaalo madaxda gobolka baay, waxa ay ku taalaa bartamaha koonfurta soomaaliya. Waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu caansan ee dalka. Waxaa lagu tiriyaa magaalo istaraatiijiyad weyn xambaarsan, waxa ay isku xirta dalalka Soomaaliya, itoobiya iyo keenya.
Magaaladu waxa ay muhiimad balaaran ugu fadhidaa isku xirka gobolada iyo degmooyinka koonfurta dalka.
Baydhabo waxaa ku nool shacbi aad u fara badan. Waxaana magaalada looga hadlaa afka maayga, waa mid ka mid ah afafka ugu waaweyn ee looga hadlo cariga soomaaliyeed.
Baydhabo waxa ay caan ku tahay dhismooyin iyo raadad taariikhi ah sida masjid jaamaca,masjid dabaqeyn, kaniisadii talyaaniga, gacan libaax, taalooyin dhowr ah, buundooyinka, iyo quruxda dabiiciga ah ee ay leedahay sida ilooyiinka, boholada, beeraha ku hareereysan iyo kuwo kale.
İnta badan magaaladu, waxay goob joog u soo noqotay taariikhyo kala cayn ah, waxa ayna caan ku ahayd cilmiga iyo nabadgelyada.
Waxayna taariikhdu xustaa in baydhabo, oo ka cuf yarayd qaab degmo, waxa ay hoos imaan jirtay boqortooyadii ajuuraan ee la aasaasay qarnigii 13aad, waxaana xigay saldanadii geledi ee la aasaasay qarnigii 17aad ee miilaadiga, waxaana xarun u ahayd degmada afgooye, waxayna burburtay 1910kii, intaa ka dib magaaladu waxay u gacan gashay gumeysigii talyaaniga.
1902dii baydhabo waxa ay muujisay kobac balaaran, taas oo ugu danbeyn 1930kii ku noqotay magaalo ka hormarsan degmooyinka ku hareereysan. 1960 kii waxaa ay sidaas ku noqotay magaalooyinka ugu muuqday ee dalka.
Sanadii 1991 kii, waa bilowgii burburka soomaaliyeed, baydhabo waxaa si weyn u saameeyay daadadkii colaadeed, waxaana burbur ku yimid qaybo badan oo magaalada iyo goobihii taariikhiga ahaa, waxayna xiliyadaas gashay marxalado aad u kala duwan horumar iyo burbur intuba.
Magaaladu, waxay si kumeel gaar ah xarun ugu noqotay dowlada soomaaliya. Sanadii 2006, waxaa hareeraha magaalada saameeyay colaado ba’an, una dhaxeeyeen dowlada iyo maxkamihii islaamiga.
Ugu danbeyn, baydhabo waxa ay gashay jawi aad u qurxoon, waxaana soo noqday raynrayntii iyo nabadgelyadii ay caanka ku ahayd, waxaana dib ugu soo laabanaya shacbiga soomaaliyeed si ay u maalgeliyaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay.
Daawo taariikh culus: maxay ahaayeen soomaalidu